galmudugnews.com » CAAFIMAADKA
Home » CAAFIMAADKA Rugta Caafimaadka Walk-In Clinic oo London laga hergeliyay Views 166746551 High Road, Tottenham, London, N17 6SB
Rugta Caafimaadka ee Walk-In Clinic ayaa dhowaan laga yagleelay waqooyiga magaalada London kadib markii la arkay baahida ay bulshadu u qabto. Waxaa asaasay dhakhaatiirta Soomaalida ee wadankan UK ka shaqeeya iyagoo leh takhasusaad kala duwan. Waa rugtii ugu horeysay oo Soomaali leedahay kana diiwaan gashan hay’ada Care Quality Commission ayna... Dhibaatooyinak Aay leedahay Siigadu. Views 1648691- Haddii qofku uu u barto inuu ku kacsado oo ku biyabbaxo gacantiisa, waxa mustaqbalka ku adkaanaysa in istiiminta kaga timaada gacalkiisa uu ka helo kacsi u dhigma kii uu ka heli jiray gacantiisa.
2- Seegadu ma keento haqab-beelka dhabta ah ee ay keento galmada cadiga ahi, iyada oo galmadu aanay ku koobnayn oo qura xubnaha taranka sida seegaysiga, balse tahay kulan nafsiyeed iyo mid jinsiyeed... Burco oo looga shiray horumarinta adeegga caafimaadka. Views 165193Kulan looga hadlayay horumarinta adeegga caafimaadka gobolka Togdheer ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka.
Kulanka waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda Caalamiga ah ee PSI ee qaabilsan dhinaca caafimaadka iyo dhaqaatiirta gobolka Togdheer.
Cabdiraxmaan Cali Xuseen oo ka tirsan mas’uuliyiinta hay’adda PSI ayaa sheegay in ujeedada kulanka uu ahaa... shaqalaha isbitalka marka oo mushaar la,aan ka cabanaya Views 165050
Shaqlahan oo kulan ku yeshy Magalada Marka aya waxa ay Shegen in Xiligan ay u baahan yihin in ay Helaan lacagihi Musharaka madama in mudo ah aysan Qadan Mushaar shaqalaha ka hawul... Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta Views 1623081Himid la’aanta waxaa loo aaneeyaa burbur qoysas badan taasoo ay sababtay raga oo ay ku adag tahay inay aqbalaan inay ku fashilmeen qancinta marwooyinkooda dhinaca sariirta. Meeshii laga waajihi lahaa dhibka waxaa jira rag isku qariya boor iyo qiiq meeshana keena dood aan meeshaba ku jirin. Xeeladaha ay isticmaalaan waxaa ka mid ah iyagoo sariirta yimaada marka marwado seexato. Arintu... SomDoc waa adeegii ugu horeeyay ee af-Soomaali ku soo bandhiga Online Rug Caafimaad Views 163600Mareegto cusub ayaa dhowaan ku soo biirtay bogaga internetka Soomaalida taasoo qawmiyada ku hadasha af-Soomaaliga loogu soo bandhigay online rug caafimaad. Waxaa daadahaynaya dhakhaatiir wax ku baratay hadana ka shaqeeya wadamada reer galbeedka. Waxay diirada saartaa dhibka sida gaarka ah u haysta qurbo-joogta isla markaana waxay Soomaalida wadanka gudahiisa joogta u soo bandhigtaa... Xawaaladda Iftin oo Xarumo badan xirtay dhaqaalo daro darteed. Views 165579Galmudugnews.com – Xawaaladda Iftin oo loolan xoogan ku jirtay sedexdii sano ee ugu dambeysay ayaa shaaca ka qaaday inay joojisay dhaqaalahii ay ku bixin jirtay xayeeysiiska Shirkadda sida uu xaqiijiyay Maamulaha guud ee Shirkadda Iftin Express Adan Ilkacase.
Ilka case wuxuu tibaaxay in gudigga sare ee Shirkadda Iftin 2012 joojiyeen bajadkii la siin jiray Warbaahinta ee lagu bixin... Caafimaad-darada dhulalka qaboobaha ah Views 163090 HORDHAC
Qoraalkan kooban kuma wada falaqaynka karno dhammaan dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dhulalka qabow, sidaas darteed waxaan xushay arrimaha iigula muhiimsan dhibaatooyinkaas, ahna kuwa ka dhasha fitamiin D yarida iyo cudurka Autism.
Inkastoo taariidhyahanadu sheegaan in cudurka Riketis-ka (Rickets, oo ka dhasha faatimiin D yarida) uu soo jiray,... Xafiiska Ladagaalanka Burcad Badeeda Galmudug oo Xariga Laga jiray+Sawiro Views 162863Xaflad uu Kasooqaybgalay Madaxweyne Maxamed Axmed Caalin ayaa Xariga Looga jaray Xafiiska Ladagaalanka Burcad Badeeda Galmuudg Waxaana Xafiiskaasi lafuray Xaafada Carafaad ee Magaalada Gaalkacyo
Tahliil Muuse Caraysane oo ah Madaxa Xafiiskaasi ayaa Sheegay in Hawlaha Xafiiskaasi ay dhawaan bilaabandoonaan wuxuuna Dowlada Caalamka ee Qatarta Burcad badeedu taabatay ugubaaqay in ay lasoo... Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha,Dhirta Iyo Daaqa Galmudug oo Lakulantay Hay’ada Beeraha Aduunka FOA Views 162572Mas’iiliyiin kasocotay Xafiiska Magaalada Hargaysa ee Hay’ada Qaramada midiibay U Qaabilsan Beeraha ee Marka Magaceeda lasoo gaabsho looyaqan FAO ayaa Waxaa Kulan laqaatay Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta Iyo Daaqa Dr.Maxamed Cali Nuur
Kulankaani oo saacado badan qaatay ayaa Waxaa Ugu dambayntii laysku afgartay Arimo Farabadn oo ay kamidyihiin sidii waxlooga qaban... Xajiinta, Cuncunka (Allergies) Views 162860Xajiintu ama Cuncuku waxay dhacdaa marka jirku uu jawaab ka celiyo shay. Tani waxaa laga yaabaa in ay keento dhibaato yar ilaa mid daran. Waxaa jira noocyo xajiin ah oo kala duwan. Kuwa ugu badan waxay kala yihiin:
• Xajiin hawada ka dhalata sida faxalka, caaryada, dufta xayawaanka ama boorka
• Xajiinta taabashada sida birta, dheeha ama kiimikooyinka
• Xajiinta cuntada sida ukunta,... Boronkiito (Bronchitis) Views 161621Boronkiito waa soo bararidda dhinacyada marinnada hawada ee loo yaqaanno bronchioles ee ku jira sanbabada. Bararku wuxuu keenaa dheecaan ka badan kan caadiga ah inuu sameysmo. Kaasi wuxuu xannibi karayaa maritaanka hawadu ay mari lahayd sanbabada waxaana laga yaabaa iney waxyeello u geysato sanbabada.
Boronkiito daran waxay ku dhammaataa 2-4 toddobaad waana la daaweyn karaa.
Boronkiitada... Dhabar Xanuun (Back Pain) Views 161764Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka, waxaa ku xanuunsada 4 ilaa shan qofood intii ah waqtiga ee noloshooda. Inta badan waxuu xanuunka ku dhammaadaa dhowr maalmo ah ilaa iyo dhoor toddobaadyo ah, laakin mar marka qaarkood waxuu qaadan karaa waqti dheer
Waxuu xanuunka dhabarka u imaan karaa si degdeg ah waxuuna ahaan karaa mid aad u xun (darran) ama waxuu u imaan... Calool xanuun jiilaal (Winter Vomiting Disease) Views 161774Cudurkan waxa keena feyras leh hido sidaha RNA bahda loo yaqaano Calici jilibka la yidhaahdo Norovirus ilaa imika inta la ogyahay waxa uu ku dhacaa oo kaliya dadka.
Waa cudur aad la isku qaadsiiyo, dhibicdii kaliya ee ah mataq ama saxaro qof cudurkan qaba ka soo baxda waxa ku jira malaayiin feyraskan ah qofkuna waxa uu ku qaadi karaa cudurkan xadi u dhaxeeya 10-100 feyras taasna waxay... Awoodaada Galmada Yar Tahay? Waxaa Cabtaa Xiltiid . Views 165237Xiltiidka ayaa ah dhir uu dhan-dhankeeda iyo urta ka soo baxda aysan fiicneyn marka biyo lagu darana durba waa uu milmaa sida caanaha oo kale ayuu noqdaa .
Xiltiidka ayaa dadka intiisa badan waxa ay u adeegsadaan in lagu daweeyo dadka jinka ku dhaco, sidoo kale xanuuno ay ka mid mid yihiin xiiq dheerta , iyadoo sidoo kale lagu eryo bahalada ama masaska si aysan uga soo dhawaan guraha... Ma Dooneysa In Ninkaada Mar Waliba Dareenkiisa Si Sahal Ah Ku Kuciso? Views 162481Si aad u kasbato ninkaada waxaad xooga saartaa in ninkaada aad ku dareen kiciso jirkaada iyo xubnahaada uu Alle kugu maneestay adiga oo madaxaada ka bilaabaya in aad ugu raaxeyso . Tinta Madaxa:Tinta waa taajka iyo quruxdaada , maalin isku day in ninkaada jirkiisa ku mar-marto isaga oo hurdaya siiba caloosha sidoo kale ku xog xabadkiisa ,ogaaw xiliga galmada socoto oo ninkaada xabadkisa... Latest news Somalia: Former ICRC Cheif accused of stealing Aid money
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139685 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31898 hitsContact US - 30630 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26190 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25657 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25310 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23909 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23081 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22453 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22382 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21488 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21156 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21153 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20856 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19894 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19890 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19293 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18527 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17834 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17783 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17698 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16911 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16857 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15548 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15504 hits Home Contact US